AMD နဲ. Intel CPU တို.ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုကျိုးလေး သိချင်လို.ပါ။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Hardware များဆိုင်ရာ
AMD နဲ. Intel CPU တို.ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုကျိုးလေး သိချင်လို.ပါ။
Hardware များဆိုင်ရာ Hardware များအကြောင်း နှင့်အသုံးဝင်ပုံ၊အသုံးချပုံများ ဆွေးနွေးထားတဲ့နေရာဖြစ်သလို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခက်အခဲများကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းဆွေးနွေးထားသည့်နေရာဖြစ်ပါသည်..
12-03-2009, 12:41 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2008
ပို့စ် 110 ခုအတွက် 324 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
AMD နဲ. Intel CPU တို.ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုကျိုးလေး သိƙ
တချို.ကတော့ ပြောတယ်။ AMD က Heat ပိုတက်တယ်တဲ့။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖိုရမ်မှ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများအားလုံး ရှင်းပြပေးကြပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ နှင်းဆီနီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, honelay86, minthumon
Find More Posts by နှင်းဆီနီ
12-03-2009, 03:06 PM
တည်နေရာ: Nazi germany
ပို့စ် 204 ခုအတွက် 951 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - AMD နဲ. Intel CPU တို.ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုကျို
ကျွန်တော် သိသလောက် ၀င်ပြောပါ့မယ် မနှင်းဆီနီရေ.......
အမပြောသလိုပဲ အင်တဲကပိုပြီးဈေးကြီးပါတယ်။ အပူတက်တဲ့နေရာမှာတော့ အင်တဲကအရမ်းအပူမတက်
ဘူးလို.တော့ ကျွန်တော့ရှေ.က ဟက်ဝဲလ်ဆရာ တွေပြောတာကြားဖူးပါတယ်။ သူတို.သုံးရင်လဲ အင်တဲကို
ပဲသုံးတယ်လို. ကြားသိရပါတယ်။ amd ကတော့အပူအရမ်းတက်တယ်လို.တော့ကြားပါတယ်။ ကိုယ်တွေ.
တော့မသိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူက အင်တဲထက်ပိုပြီး ဈေးသက်သာတယ်လို.ပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်က တတ်လို.တော့ ၀င်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့ထက် သိတဲ့ အကိုတွေ အမတွေလဲ ၀င်ရောက်
[COLOR="Red"]သင်နှင့်သင့် ပတ်ဝင်းကျင် ကမ္ဘာမြေကြီးအား ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် သင်ကိုယ်
တိုင် ပလပ်စတစ်အိတ်များ သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝင်း
ကျင် သန်.ရှင်းစေရေး ပါဝင်ကူညီပေးကြပါစေလိုကြောင်း[/COLOR]......။
[COLOR="Red"]Please don't use plastic bag[/COLOR].:6:
[COLOR="Red"]Recycle to use Plastic bag[/COLOR].:6:
အထက်ပါပုံမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် DvD တချပ်ကို Download လုပ်သော Speed
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ သောကမဲ့မိုးတိမ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, g00gle, honelay86, minthumon
Find More Posts by သောကမဲ့မိုးတိမ်
12-03-2009, 03:45 PM
ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလည်း ပြောပြကြပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နှင်းဆီနီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
12-03-2009, 04:36 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2008
တည်နေရာ: on the earth!!
ပို့စ် 184 ခုအတွက် 919 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
AMD က ပိုပြီး ငြိမ်တယ်။ အကြမ်းခံတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်အနေထားမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုနဲ့ မကိုက်ပါဘူး။ အဲယားကွန်း အခန်းထဲမှာ သုံးရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး AMD က ဈေးပိုသက်သာပါတယ်။ ထိုနည်းတူ သူနဲ့ ဆက်စပ် အသုံးပြုရတဲ့ အခြား ဟက်ဝဲလ် ပစ္စည်းတွေကလည်း အင်တဲလ်ထက်စာရင် ဈေးသက်သာပါတယ်။
Intel ကတော့ လူသုံး အများဆုံး processor အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အပူသက်သာပါတယ်။ အခုဆို စွမ်းအားမြင့်ပြီး ဈေးအနည်းငယ် သက်သာတဲ့ Corei7 လို quad core စွမ်းရည်နဲ့ CPU များကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကတော့ ဈေးကြီးတယ်... :(
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ yeman အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, နှင်းဆီနီ, blackNwhite, g00gle, honelay86, Ko Kagyi, kozaw.dagon, lu soe, minthumon
Visit yeman's homepage!
Find More Posts by yeman
12-03-2009, 06:37 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2007
ပို့စ် 138 ခုအတွက် 444 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော်လဲ ဈေးနဲနဲ ပိုသက်သာလို့ တေဘယ်လ်လက် AMD လက်တော့လေးဝယ်သုံးထား ပါတယ်။
အင်တဲလ် နဲ့ဆိုရင် တေဘယ်လ်လက်ချင်းအတူတူ စင်္ကာပူ တစ်ထောင်ကျော်လောက် ကွာတယ်လေ။
အကြမ်းခံ မခံတော့မသိသေးဘူး။ သုံးနေတာတော့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။
အပူထွက်တာကတော့ တကယ်ဗျို့ ... စက်စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Heat က ဟူးဟူး ဟူးဟူး နဲ့ထွက်တော့တာဘဲ။
မွေ့ယာပေါ်မှာ ချသုံးလို့ကတော့ လေ၀င်လေထွက် ပိုမကောင်းလို့ထင်တယ် ... အပူထွက်တဲ့နေရာကို ကိုင်တောင် မကိုင်နိုင်တော့ဘူး။
အသံလဲ သာမန်ထက် နဲနဲ ပိုကျယ်တယ်လို့ထင်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ Ko Kagyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, နှင်းဆီနီ, blackNwhite, g00gle, honelay86, lu soe, minthumon
Ko Kagyi ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Ko Kagyi
12-03-2009, 07:19 PM
အစ်ကိုတို.ပြောသလို AMD ကအပူထွက်တာများတယ်ဆိုရင်တော့
Intel ကိုပဲ စဉ်းစားပါတော့မယ်။
မွေ.ရာပေၞထားသုံးတာ အပူတက်တယ်ဆိုလို. ပြောချင်ပါသေးတယ်၊
Laptop ကိုမွေ.ရာပေၞမှာ တင်ပြီးမသုံးသင့်ဘူးလို.ပြောတယ်ဗျ။
စာပွဲပေၞမှာတင်ပြီးသုံးတာ ပိုကောင်းတယ်လို. ပြောကြတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ နှင်းဆီနီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, blackNwhite, honelay86, minthike, minthumon
30-05-2009, 08:07 PM
တည်နေရာ: United Arab Emirates
ပို့စ် 30 ခုအတွက် 103 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - AMD နဲ. Intel CPU တို.ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုကျို
AMD က အရမ်းပူတယ် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မသိခင်က HP laptop ကို AMD နဲ့ ၀ယ်လိုက်တာ ပူလိုက်တာမပြောပါနဲ့ တော့ ဗျာ။ အဲယားကွန်းလည်းမရဘူး ပူတာပဲ။ အခု တော့ သူတို့ laptop အောက် မှာ USB fan လေး ထားမှ နည်းနည်း ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ ကွန်တော်ကတော့ ဈေးနည်းနည်း ပိုပေးရပေမယ့် Intel ကိုပဲ ရွေးလိုက်တယ် ။ Core2Duo လေ ၂၄ hour without heating . Cool
Last edited by ရဲထွတ်; 30-05-2009 at 08:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ရဲထွတ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, blackNwhite, g00gle, lu soe, minthike
Find More Posts by ရဲထွတ်
01-06-2009, 11:30 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2008
တည်နေရာ: live in yankin
ပို့စ် 55 ခုအတွက် 150 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Intel ကိုပဲ သုံးစေချင်ပါတယ်။ AMD ကိုတော့ မသုံးဘူးလို့ မသိပါ။ Heat ကတော့ CPUတိုင်း တက်ပါတယ်။ Airconထဲမှာမကလို့ ရေခဲတောင်ကြားတွင်သုံးရင်တောင် မည်သည့် CPU မဆို Heat တက်ပါတယ်။ ကိုယ်က တကယ်လို့ Desktopကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်Casingက Airflowကောင်းရမယ်။ နောက်ပြီး Heatsink နဲ့ ပန်ကာကို အထူးသဖြင့် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Intel Core2Quad ကို အခု သုံးနေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ Intel ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ Boardနဲ့တွဲသုံးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Intel ရဲ့ websiteကို သွားရောက်လေ့လာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ sawma.lm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မမထွန်းထွန်း, နေမင်းမောင်, blackNwhite, honelay86, lu soe, minthike, minthumon
Find More Posts by sawma.lm
11-06-2009, 07:43 AM
ပို့စ် 65 ခုအတွက် 210 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by Ko Kagyi
အစ်ကိုရေ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်. အစ်ကိုလဲသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ laptop တွေကို အပူစုပ်ထိန်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ(ဥပမာ။ မွေ့ယာ၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံး) တွေနဲ့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေနဲပထိတွေ့အသုံးမပြုသင့်ဘူးဆိုတာလေ။ laptop ပျက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါဗျာ။ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
[B][COLOR="DarkRed"]အထီးကျန်ခံစားမှုဆိုတာကိုမင်းသိလား ... အေးလေ မင်းဘယ်သိပါ့မလဲ မင်းကအထီးမှမဟုတ်တာ ..[/COLOR][/B]
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သောကြာသား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, blackNwhite, minthumon
Find More Posts by သောကြာသား
17-06-2009, 08:55 PM
ပို့စ် 45 ခုအတွက် 106 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Intel & AMD ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကဘာလဲ။ AMD ကဂိမ်းမှာသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် တခြားထူးခြားချက်တွေ ဘာတွေရှိသေးလဲ။ Intel ဟာလုပ်ငန်းသုံးအတွက်ကောင်းတယ် ဆိုတာထက်အခြားဘာစွမ်းဆောင်မှုတွေပိုသေးလဲ။ AMD တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Intel ကို ကုန်သည်တွေက ဆိုင်တွေမှာအများကြီးတင်ရောင်းလို့ ကြုံကြိုက်လို့ဝယ်သုံးကြတာလား။ တကယ်ကြိုက်လို့လား တစ်ကယ်ကောင်းလို့လား။ သုံးရတဲ့အရသာချင်းကကော ဘယ်လိုကွာလဲ? နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟာ ဈေးအကြီးဆုံးဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပဲပြောမလား။
ဘယ်ကုမ္ပဏီကဘယ်ပစ္စည်းထုတ်တာ ဘယ်လောက်ရှုံးတယ် ။ ဘယ်ခုနှစ်ကဘယ်ပစ္စည်းထုတ်တာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဖတ်ခြင်ဘူး။ အဓိကဖြစ်တဲ့ CPU တွေရဲ့အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကိုပဲသိချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အောင်ထက်ကျော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
honelay86, minthike, minthumon
Find More Posts by အောင်ထက်ကျော်
18-06-2009, 09:53 AM
ပို့စ် 118 ခုအတွက် 418 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မော်ကျိုးလေးလည်းနည်းနည်းဝင်ပြောမယ်နော်.... Intel ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ 60% လောက်သုံးတယ်လို့ထင်တယ်. သူက AMD ထက်အကြမ်းခံတယ်လေ.... ပူအိုက်တယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ ပြီးတော့ မီးမမှန်တယ့် ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ သင့်တော်ဆုံးလို့ထင်တယ်.....
တစ်ခြားနိုင်ငံအတွက် ကျွန်တော်လည်းမရောက်ဖူးလို့ မပြောတတ်ဘူး....... မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးမယ်ဆိုရင် Intel ကိုဘဲသုံးသင့်ပါတယ်.....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မော်ကျိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မော်ကျိုး
25-06-2009, 06:44 PM
ပို့စ် 65 ခုအတွက် 323 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွှန်တော်အနေကလဲအင်တဲလ်ကိုပဲသုံးစေချင်တာပါ...ဘာလို့ လဲဆိုတော့ကျွှန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာဆင်ခဲ့ သမျှမှာအင်တဲလ်ကပဲပြန်ပြီးမလဲရတာပါ...အေအမ်ဒီကတော့ ပြန်လဲရတာပိုများလို့ပါ.. သိသလောက်ပြောတာပါနော်..တခြားဟာတွေလဲရှိခြင်ရင်ရှိမှာပါ
Last edited by PyaitSone; 10-06-2011 at 10:04 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုဇော်
19-04-2011, 07:33 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2010
ပို့စ် 83 ခုအတွက် 372 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော် လက်၇ှိ သုံးနေတာက HP Laptop AMD processor နဲံသုံးနေတာပါ။၀ယ်ပြီးခါစ ၁ နှစ်လောက်ထိက ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ ၁ နှစ်ကျော်လဲ ရောက်လာရော အပူက တော်တော်တက်လာပါတယ်။
processor က AMD Turion x2 ပါ။ အပူတက်လာပြီးရင် auto shutdown ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ပူတဲ့နေရာကို စမ်းကြည့်တော့ ကြက်ဥတောင် ကြော်လို့ရမယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ intel ထက်ပိုမြန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကိုလင်း1z အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
g00gle, honelay86, minthike, minthumon
Find More Posts by ကိုလင်း1z
26-05-2011, 05:49 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2011
ပို့စ် 1 ခုအတွက်7ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
AMD က ကိုယ်ရဲ software ကို ဘယ်လောက်တိုက်ရိုက် အသုံးပြုမှု ပေါ်မှုတည်ပြီး အသုံးဝင်မှု ရှိတယ်။ ဥပမာ-- Game -Video-Edit တိုလို CPU ကနေတိုက်ရိုက်မောင်းပြီး သုံးရင် Intel ထက်မြန်တယ်၊ ကောင်းတယ် ။ နောက်ပြီး ဈေး သက်သာတယ်။ သာမန်သုံးဆိုရင် မကွာဘူး၊
Thailand အရောင်းရဲ 80 % က AMD - Desktop တွေ။ဈေး ကလဲ သက်သာတယ်လေး။
core4ခု နဲ AMD cpu ဆို တစ်သိန်းအောက်နဲရတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ကိုစီုးမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, မေဦးမွန်, aungphyo, honelay86, KznT, minthike, minthumon
Find More Posts by ကိုစီုးမင်း
09-06-2011, 10:33 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2011
ပို့စ်2ခုအတွက် 16 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့ အမြင်တော့ ဘာသုံးသုံး သိပ်မထူးဘူးထင်ပါတယ် ........ ဆိုလိုတာက ကြိုက်တာ ၀ယ်သုံးပါ ...... Laptop တွေမှာ AMD တွေကပူသတဲ့ လား ......... ပူတဲ့ Intel တွေလဲ လက်ညိုးထိုးမလွှဲ သလို မပူတဲ့ AMD တွေလည်းရှိပါတယ် ....... ကိုယ်ဝယ်တဲ့ လက်တော့ Brand and Model တွေနဲ့ ပဲဆိုင်ပါတယ် .... တစ်နှစ်လောက်ကြာမှ ပူလာတယ်ဆိုတာကတော့ laptop တွေရဲ့ Heatsink တွေဟာ ကြာလာတဲ့ အခါ ဖုန်တွေပိတ်သွားတတ်ပါတယ် .... အဲဒါကတော့ ဆိုင်ကိုသွားပြီး ချွတ်ဆေးခိုင်းလိုက်ရင် ... မပူတော့ပါဘူး ..... Intel တွေလည်း ဖုန်ထူလာရင် ပူတာပါပဲ ....... ပျက်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ .... ကျွန်တော် ကိုင်သမျှ ..... ပြင်သမျှ လက်တော့ တွေမှာ Intel ဖြစ်ဖြစ် AMD ဖြစ်ဖြစ် cpu ပျက်တယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသေးပါဘူး ....... ဆိုလိုတာက CPU ဆိုတာ ပျက်ခဲပါတယ် ..... မြန်အောင်ဆိုတာကတော့ Model နဲ့ ပဲဆိုင်ပါတယ် .... Model တူရင် Intel ပိုမြန် တယ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုနိုင်ပေမယ့် .... ဈေးနှုန်းချင်းတူရင် ..... ယေဘုယျအားဖြင့် AMD ကပိုမြန်ပါတယ် ....... ဂိမ်းကစားတဲ့ နေရာမှာ ဟိုဟာကောင်းတယ် ဒီဟာကောင်းတယ် ...အလကားပြောတာ........ ကျွန်တော်ကစားဖူးသမျှ ဂိမ်းဆိုတာ cpu နဲ့ သိပ် မဆိုင်သလိုပဲ .... speed လုံလောက်ရင် ဘယ် cpu ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ် .... Graphic Card သာရွှေးတာ ...... ကဲ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုရွှေးရမလဲ ...... ကျွန်တော် အကြံပေးလိုတာကတော့ Desktop ဆိုရင် ... ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ cpu ကိုဝယ်ပါ .... . Model မြင့်လေ ဈေးကြီးလေ ကောင်းလေပဲ ..... Laptop ဆိုရင် ..... ကိုယ်ရွှေးချယ်ဖွင့် ရှိတဲ့ brand and model တွေကိုမှတ်ပြီး အင်တာနက်မှာ သွားရှာကြည့်ပါ ..... သုံးဖူးတဲ့ သူတွေ ကောင်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ ..... ဟာကို ၀ယ်သုံးပါ ...... ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးတဲ့ Brand ဖြစ်ပါစေ ...ယေဘူယျအားဖြင့် ကောင်းတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ Error အနည်းအပါး ရှိတတ်ပါတယ် .......
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ အဖြူရောင်ကောင်းကင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, အောင်ဗလ, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, bagothar85, blackNwhite, g00gle, honelay86, lu soe, minthike, minthumon, sawlinux, smlat88
Find More Posts by အဖြူရောင်ကောင်းကင်
06-11-2012, 10:40 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2010
ပို့စ်2ခုအတွက်3ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုသားချေ
06-11-2012, 11:07 PM
ပို့စ် 754 ခုအတွက် 6,476 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဲဒီ မေးခွန်းက တလွဲကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ယှဉ်ချင်ရင် Brand နဲ့ မယှဉ်ရဘူး။
Model အလိုက်2ခု၊3ခု ယှဉ်ရမှာ။
လူတွေက model အလိုက် quality ကို ဆုံးဖြတ်ရမှာကို၊ brand နဲ့ လိုက်ဆုံးဖြတ်တော့ အခက်သား။
If something doesn't work, break it and createaBETTER one.
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောင်ဗလ, kyawminkhoung, lu soe
Find More Posts by g00gle
18-02-2013, 03:28 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2013
ပို့စ် 155 ခုအတွက် 498 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် ဝင်ရေးပါမယ်။
Notebook PC တွေမှာ AMD Processor တပ်ထားလို့ ပူတယ်လို့ မထင်ဘူးဗျ ။
Intel Processor တပ်ထားတဲ့ Notebook တွေကလည်းပူတာပဲဗျ ။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ Compaq Intel Core2Dual တလုံးဆိုရင် ပူတာမှ တော်တော်ကြီးကို ပူတာဗျ ။
နောက် ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ MSI Notebook ဆိုလည်းပူတာပဲ ။သူလည်း Intel Dual Core ပါ ။
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ PC တလုံး Performance ကောင်းတယ် Heat တက်တယ် မတက်ဘူးဆိုတာတော့ CPU အပေါ်အဓိက အပြစ်တင်လို့ မရဘူးထင်ပါတယ် ။
PC မှာ အသုံးပြုထားသော Hardware တွေရဲ့ ဟန်ချက်ညီမှု နောက် ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီသော ကွန်ပျူတာတွေ ဥပမာ Acer , Lenovo စသော Brand တွေက အသုံးပြုရတာအတော်ကို အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်လို့ ထင်တယ် ။
ကွန်ပျူတာ ထုတ်ဝေသူတွေက ဝယ်ယူမယ့်နိုင်ငံအလိုက်လည်း ထုတ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဗျ ။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ Dell တလုံးဆိုရင် အသုံးပြုရတာဘယ်လို့မှကို အဆင်မပြေပါဘူး ။ စလုံးကနေသယ်လာတာတဲ့ဗျာ။
ကောင်းတယ်လို့လည်း ပိုင်ရှင်က ပြောပါတယ် ဘာတွေ ကောင်းတာလည်း ကျွန်တော်တော့ မသိပါဘူး စက်ကလည်း အတော်ကို ပူပါတယ် ။ Processor ကလည်း အထက်ကဆွေးနွေးသလို Intel ပါပဲ ။
တချို့သော လူတွေဆိုရင် ကွန်ပျူတာကို CPU တခုတည်းမှတ်ပြီး ဝယ်တာလည်း ရှိပါတယ် ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Core i3 လိုမျိုး Processor တွေပါ ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ထင်တာ ကွန်ပျူတာကို ဝယ်မယ်လို့ စဉ်းစားရင် CPU ကိုပဲ အသေမှတ်လို့မရတာတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။
Graphic , Ram ( Memory) , Motherboard စတာတွေ အပြင် ဝယ်ယူမဲ့ဆိုင်ကလည်း စိတ်ချရသော ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။
ကျွန်တော်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာဗဟုသုတ သိပ်မရှိပါက နိုင်ငံခြားကနေ ဝယ်လာပေးမယ်ဆိုသော ကွန်ပျူတာတွေကို ရှောင်သင့်တယ်လို့လည်း ထင်မြင်မိပါတယ်။
နောက်မှ ပြဿနာတက်ရင် ဘယ်ကို သွားပြင်ခိုင်းရမှန်မသိ ဖြစ်တက်တယ်နော့် ။
ကွန်ပျူတာက Intel ကို သုံးမှ AMD ကို သုံးမှ ကောင်းတာမျိုးတွေလည်း မရှိနိုင်ပါဘူး ။
သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ ကောင်းမှာပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ powerlight02 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by powerlight02
18-02-2013, 03:31 PM
ကောင်းတယ်လို့လည်း ပိုင်ရှင်က ပြောပါတယ် ဘာတွေ ကောင်းတာလည်း ကျွန်တော်တော့ မသိပါဘူး စက်ကလည်း အတော်ကို ပူပါတယ် ။ Processor ကလည်း Intel ပါပဲ ။
18-02-2013, 11:36 PM
CPU ပူတာက များသောအားဖြင့် ဖုန်တပ်နေလို့ ဖြစ်တာပါ။ http://www.myanmarfamily.org/forum/s...93&postcount=9 မှာ ဖုန်မှုတ်နည်းကြည့်ပါ။ Laptop cooler လေးတွေ အောက်က ခံသုံးတာလဲ ကောင်းပါတယ်။ နောက် လက်ကိုင် ဖုန်စုပ်စက်လေးတွေ ၀ယ်လို့ရရင် ဖုန်တွေစုပ်ထုတ်လိုက်ရင် ပူတာသက်သာပါလိမ့်မယ်။
19-02-2013, 09:14 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2007
ပို့စ် 1,805 ခုအတွက် 9,626 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
65C လောက်အထိတော့ စိတ်ချရမယ်ထင်ပါတယ်(ပုံသေတော့လဲ မဟုတ်ဖူးပေါ့) cooling system တွေကောင်းရင်လဲ အပူခံပါတယ်
cooling system design ချို့ယွင်းချက်တွေကြောင့် တစ်ချို့စက်တွေပူပါတယ် ဒါပေမယ့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
Average cpu temperature?
what is the average cpu temperature? i have an amd turion 64 x2 and its at 43C(108F). is that normal
108 is perfectly normal temp. Realize that most processors are using 45-100 watts of power, likealight bulb. So running 20-30 degrees higher than ambient isn't bad. I've seen some systems running closer to 160-180 and still work ok, although I'd expect temps of that range to shorten the usable life of that computer. Anything below 120 is good.
Other Answers (1)
43C is kinda hot. I wouldn't worry to much about it though. My gaming PC gets up to 65c when playing certain games.
Last edited by minthike; 19-02-2013 at 09:18 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit minthike's homepage!
Find More Posts by minthike
ဆွေးနွေးချက် စတင်ရေးသားသူ ကွပ်ပျစ်ဝိုင်း ပြန်စာများ နောက်ဆုံးပို့စ်
ကိုကို မမ များအတွက် G talk မှတ်စု maJunior Chat software များဆိုင်ရာ 159 25-07-2011 10:05 AM